Boggaga Qaxarka Qabyaalada ee Buun Buuniya Beenta Jwxo-shiil, Jiitay Waa Hore. – Rasaasa News
Aug 15, 2009 Jwxo-shiil, Jwxo-shiilo
Ma runbaa ma been baa, ma dadka shaki gali baa, ma cadogaa dhuux sagaaraa loogu subkadaabaa, waan saluugnee soo celcelintiyo sawdkan beentaa yey ku sirayaan.
Bogga Qorahey.com oo uu lahaan jiray nin u dhashay gabalka Qoraxeey oo la yidhaahdo Maxamed Ibraahin, ayaa haatan waxaa wax ku qora gabadha la yidhaahdo Roda Maxamed Ibrahi Afjano oo gabayda, ayaa waxaa uu noqday bogga ugu beenta badan boggaga ka soo jeeda dhulka Somalida Ogadeeniya. Waxaa uu boggani baacac dheeraaday bogga la yidhaahdo Ogaden.com oo mudo dheer u fidiya munaafaqada iyo kala mina warka Jabhada Mr. Jwxo-shiil.
Waxaa jira boggag dhawr ah oo ku dhisan qabyaalad iyo munaafaqad, oo ay masuul ka yihiin Jwxo-shiilo [qabiil ku Jabhad gasle], kuwaas oo aan ka gaabsan beenta iyo warxumo tashiilka. Qoraayada boggag internetka dhamaantooda ma aha dad u tababaran wariyenimo, hadana waxaa la is dheer yahay Caqliga iyo Aqoonta kale, taas oo hagta kolka uu ruuxu wax qorayo. Boggaga Jwxo-shiilo, sidaas ma aha kolka aad akhrididna, waxaad ka niyad jabi in aad gasho boggaga Internetkaba mar dambe, ma laha hanaan jumladeed, hakad iyo joogsi midna qorida naxliga qabyaaladeed ciwaanka ayaad ka garan. Hadaan idiin iftiimiyo boggagan waxaa ka mid ah; hanqadh,Ogadennet, huuraleey,horusocod, dufaan, ogaden.com iyo qorahey oo ay webmaster ka noqotay gabadha aan kor ku soo sheegnay.
Boggagan ay waxaay qaarkood, Doraato soo qoreen cod la isku kabkabay [voice clips] oo la yidhi waxaa laga qabtay maalin dhaw Jwxo-shiil , waxaa run ah in uu codku yahay codkii Jwxo-shiil, waxaase huf iyo been iyo hal aan jirin ah in uu Jwxo-shiil waraysi bixiyey. Waxaan hayaa jawaabha uu bixinayo, oo ah kuwo laga soo kala googooyey jawaabo uu hore u siiyey BBC-da iyo VOA-da.
Bishii May 2009, waxay sidan si la mid ah Qorahey, u soo daysay codkii Jwxo-shiil, iyada oo kolkaasna lahayd, telefoon ayuu gudaha ka soo diray. Sidan oo kale waxaa mar 3aad cod la rikoodh gareeyey telefoon la soo diray dad laggaga dhaysiiyey kol ay ku Kulan Micno Daro ah isugu yimaadeen qayb ka mid ah kooxda Jwxo-shiil todobaadkii ina dhaafay, oo ay ku qabteen laba magaalo oo ku kala yaal Maraykanka iyo Ingriiska.
Jwxo-shiil Irbad ma ah, awal horebana Ideecadaha wuu ka hadli jiray, waxaase dhab ah in uu jiro wax u diiday in uu waraysi bixiyo, wax war ahna lagama hayo tan iyo badhtamihii bishii February 2009, xiligaas oo la sheegay in uu dhaawacmay. Afka laguma dili karo Jwxo-shiil, waxaase dhab ah in ayna jirin cid ogg, waxa uu ku sugan yahay iyo meel uu joogo midna, waxaa kale oo khalad ah in ay saaxiibadii iyo qoyskiisa midna uu yidhaahdo wuu dhintay waayo xaqiiqa ma ay hayaan.
Waxaanse dadka Somalida Ogadeeniya ka daadagaynin, in labadii todoba ay kooxda beenta ee Jwxo-shiilo, cod la jarjaray soo galiyaan Internetka iyaga oo leh waxaa waraysatay Ideecada ICDS, ideecadee leh magaca xarfahan la soo gaagaabiyey, yaase loogu baanayaa in uu nool yahay Jwxo-shiil, waa baryahan codka Jwxo-shiil la doonayo in shilimo lagu uruursado.
Webmasterka Qorahey Roda Af Jano waxay qortay in ciidamo ONLF ah ay tababar ku dhamaysteen xerada Guud-Cade, Ina Guud-Cade waxaa uu ka mid ahaa gole dhexe oo uu Jwxo-shiil kaligii samaystay oo aan xeer Jabhadeed lagu magacaabin Jwxo-shiil dartiina Jabhada u galay. Eebe ha u naxariistee, waxaana lagu dilay gudaha Ogadeeniya isaga iyo afar nin oo kale bishii May 2009, marka waxaan isweydiinaynaa goorma ayaa la sameeyey xerada tababarka ee GUUD-CADE, waa arimaha qabyaalada boggagan ee ayna fahmaynin dadka dhoohani, imisa mujaahid oo caan ah ayaa ONLF ka dhintay.
Qabyaalada qarsoon, waxaa laga bartay Jwxo-shiilo [qabiil ku Jabhada], waana dadka ay taariikhdu xusi doonto xili kasta, waxayna dumiyeen dadaalkii dadweynaha Somalida Ogadeeniya, waxayna kalifeen in ay gaadho xumaantu kob ayna waligeed xumaan qabyaaladeed ka gaadhin dadweynaha Somalida Ogadeeniya.
Waxaanu sii wadi doonaa wacyi galinta dadweynaha, dhibaatooyinka uu Jwxo-shiil gayeysiiyey halganka ay hormuudka ka tahay Jabhada Wadaniga Xoreynta Ogadeeniya [Jwxo], oo maanta dhibaatooyinka haystaa ay marayaan heer aad looga xanuunsado, waxaana taas ka sii xanuun badan in qabyaalad darteed ayna jirinba cid doonaysa in ay wax ka qabto oo ruux waliba isleeyahay Ilahayo adiga ku nabad gali.
Waxaanu soo qori doonaa qoraal ku saabsan Jwxo-shiil, hadii uu dhintay iyo hadii uu nool yahay iyo arimo badan oo kale oo ku saabsan xaalada siyaasadeed ee ururka ONLF.
rasaas baa runta sheegee rafiiqaaqa ka yeelo